बिजनेस Archives - Pathibhara Channel
पाँच महिनापछि नियमित उडान, विमानस्थलमा यात्रुको व्यवस्थापन सेनाबाटै
१६ भदौ, काठमाडौं । पाँच महिना लामो गतिरोधपछि सरकारले आज रातिबाट औपचारिकरुपमा नियमित उडान सुचारु गर्दै छ । मध्यराति १ बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापानको नारिताका लागि उड्ने छ । साे जहाज बुधबार काठमाडाैं फर्कने छ । बुधबार नै क्वालालाम्पुरबाट मालिन्दो एयरको जहाजले यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउने छ । कोरोनाका...
१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई रिचार्जमा शत प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोनाको संक्रम फैलनबाट रोक्ने गरी लकडाउनको लागू गरेपछि धेरै ग्राहकलाई रिचार्ज कार्ड किन्न समस्या परिरहँदा टेलिकमको यस्तो निर्णय आएको हो । यो व्यवस्था बुधबार रातको १२ बजेपछि रिचार्जमा मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ...
एनसेलमा सर्वोच्चको पूर्ण फैसला, ‘तीन महिनाभित्र कर उठाउनू, कर नतिरेसम्म नाफा लैजान नदिनू’
काठमाडौं, २६ चैत : सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको लाभकर तीन महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ तयार पारेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन आदेश दिएको हो । सरकारलाई निदृष्ट गरेको लाभकर चुक्ता नगरेसम्म लाभांस वितरण र सेयर...
दुई हवाईजहाज चार्टर गरेर जन्ती, अधिकांशको पहिलो काठमाडौं भ्रमण
जन्ती जाँदा गाडी रिजर्भ गरेर जाने चलन सामान्य हो । तर, यहाँका एक व्यक्तिले छोराको जन्ती जानेक्रममा ६९ जन्तीलाई दुई वटा हजाईजहाज चार्टर गरेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका ९ का नगेन्द्र थापाका छोरा दिनेशको विवाहका क्रममा जीतपुरबाट काठमाडौँमा जन्ती आतेजातेक्रममा बुधवार चार्टर गरिएको प्लेनमा सवार जन्ती । जसमध्ये अधिकांश...
“औधोगिक शान्ति नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६” हुने, आबेदन फारम खुल्ला
काठमाडौँ : बिगत लामो समय देखि नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुमा औधोगिक ब्यापार मेला महोत्सब तथा सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरि सयौ कलाकारहरुलाई स्टेज प्रदान आएको सस्था औधोगिक शान्ति नेपाल सस्थाले सांगीतिक क्षेत्रमा नया आयाम थप्नको लागि तथा सांगीतिक व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्नका लागि म्युजिकका विभिन्न विधा तर्फ “औधोगिक शान्ति नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६” गर्ने...
तनाव बढेपछि आपूर्तिमन्त्री यादव कालिमाटी बजारमा पुगे
४ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा तनाव बढेपछि आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव आफैं कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा पुगेका छन् । मन्त्रीसँग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे पनि बजार अनुगमनमा भएको अवरोधबारे जानकारी लिन पुगेका छन् । विमान कालिमाटी तरकारी अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई बिचौलिया र ब्यापारीहरुले धमक्याएका...
बाराका किसान आन्दोलितः सडकमै पोखिदिए दूध
३१ साउन, बारा । सरकारले दुधको मूल्य घटाएको विरोधमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका किसानले सडकमा दुध पोखेर बिरोध जनाएका छन् । बुधबार विहान जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१८ मनहर्वाका किसानहरुले सरकारको विरोध गर्दैसडकमा दूध पोखेका हुन् । डुमरवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवानाको मनहर्वा उपकेन्ऽमा आवद्ध १५० बढी किसानहरुले मानमत-कलैया सडकखण्डको मोती...
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्दै, जग्गा प्लटिङ पनि गर्न नपाइने
काठमाडौं । तपाईको नाममा कति जग्गा–जमिन छ ? कतै तपाईसँग हदबन्दी भन्दा बढी त जग्गा छैन ? यदि बढी जग्गा छ भने अब तपाईले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कसैको नाममा भए जफल गर्ने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री...
१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट [पूर्णपाठसहित]
काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले राजश्वबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब...
उमेर २५ वर्ष मात्र , तलब खान्छिन् करोड, को हुन मधुमिता ?
काठमाडौं, २६ बैसाख । उमेर २५ वर्ष, तलव महिनाको नौ लाख रुपैयाँ । तपाईलाई विश्वास नलागे पनि बिहारकी मधुमिता कुमारका लागि यो सपना होइन, बरु वास्तविकता हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च कम्पनीका रुपमा चर्चित गुगलले मधुमितालाई एक कारोड आठ लाख रुपैयाँ वार्षिक प्याकेज दिने गरी जागिर दिएको छ ।...
123 Newer →